ပန်ဒိုရာ: ငါဝယ်ထားပြီး မစားဖြစ်တဲ့ ပေါင်မုန့်တစ်ချပ်ရဲ့ မာန
စဉ်းစားမနေနဲ့ ၀ါးထည့်လိုက်ပါလား တဲ့
သမိုင်းဝင်စကား ပြောသွားခဲ့တယ် တဲ့။
အားထားစရာ မဖြစ်ပေဘူးလား တဲ့။
ငါး ဖားလောက်မှ အရေးမစိုက် ဆိုတာ
မိုက်လှတဲ့ ဒီသတ္ထ၀ါ ဘယ်သိရှာမလဲ။)
ကိုယ့် အိတ်စပိုင်ယာဒိတ်ကိုမှ အားမနာ
ဘုရားဒကာရန်တိုက် မလောက်မင ကြားက
ကြက်ဥနဲ့ နို့ မှာရော မာန မရှိကြဘူးလားဗျ…. သူတို့အားလုံးကို တနေ့တည်းအတူတူ ၀ယ်ခဲ့တာဘဲ မဟုတ်ဘူးလား။…..း-)
I would have put it into the toaster, spread it with butter, make scramble egg and have black coffee, read newspaper and havealittle chit chat over the breakfast with the other half about what the current issue are and haveanice cuddling time with that special one.
Perfect weekend breakfast time!!!
I should do it more.. haha
စကားများတဲ့ပေါင်မုန့်လေး ပူတင်းဖြစ်သွားရှာပြီ ... :)
အောက်ဆုံးစာပိုဒ်ကို အကြိုက်ဆုံးပဲ တော်တော် စကားမယ် :)
ဒီလို အရေးအသားတွေကြောင့် ခဏခဏ ရောက်ဖြစ်တာပေါ့ အစ်မရယ်...
ရေးထားတဲ့ အိုင်ဒီယာလေး ကောင်းလိုက်တာ..
အစကတော့ ပူတင်းကို အပူတပြင် ရှာမိသေးပေါ့
နောက် ကဗျာကကောင်းလွန်းတော့ မစားဝံ့တော့ဘူးဗျ :)
လက်ညှိုးညွှန်ရာ ရေဖြစ်သလို အရီးပန်ရေးသမျှ ကဗျာဖြစ်နေပီ :)
ဟဲဟဲ.. ဒါမျိုးလည်း ရသကိုး...
ဒီလို အရသာလေးတွေကလဲ ခံတွင်းတွေ့ တယ် ပန်ရေ… ကြိုက်တယ်…
ပေါင်မုန့်က ကဗျာတစ်ပုဒ်ဖြစ်လို့ 
ဟုတ်တယ် Pandora ရယ်။ တို.လဲ အပါတ်တိုင်း တထုတ်ဝယ်တယ်။ ကုန် အောင်လည်း မစားနိုင်. အမြဲဘဲ ပစ်ရတယ်။ ပူတင်းလဲ မဖုတ်တတ်တော.ခက်တယ်။
ဒီကဗျာအရေး အသားလဲ သဘောကျတယ်
ကဗျာ ဖတ်သွားပါတယ် မပန်ရေ ..
ဒိတ်လွန်ပေမယ့် ပူတင်းတော့ ဖြစ်သေးသားပဲ။ အားမလျှော့တဲ့ ပေါင်မုန့် ပေါ့.. =)
ပူတင်းဖုတ်တဲ့ ပန်ဒိုရာ ရေ...
နောက်တခါလုပ်ဖြစ်ရင် ခေါ်လိုက်နော်.... :D
အော်..ပေါင်မုန့်လဲ လျှာရှည်မိတော့ အဖုတ်ခံလိုက်ရပါလားနော်..
ပန်ပန်နဲ့ စကားပြောရင် ဆင်ခြင်မှပဲ..။
ငါဝါးထားပြီး မမျိုဖြစ်တဲ့ ပေါင်မုန့်တစ်ချပ်ရဲ့ ဒုက္ခ...
ဖြောင်း… ဖြောင်း.. ဖြောင်း (လက်ခုပ်တီးသံ)။
ဒီကဗျာလေး ကြိုက်လိုက်တာ ပန်ပန်ရေ။ bravo!
အဟဲ … သရုပ်ဖော်ပုံမှာ Sign က ကြီးနေတယ်။
ပေါင်မုန့်ကလေးကို လာစားကြသူတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
I so like this poem........